Baraf xoogan iyo Dabeylo ka da'ay qeybo kamid ah Sweden
HomeWararka Maanta SomaliskaBaraf xoogan iyo Dabeylo ka da’ay qeybo kamid ah Sweden
Baraf xoogan iyo Dabeylo ka da’ay qeybo kamid ah Sweden
Qeybo badan oo ka mid ah Iswiidhan waxaa ka socda duufaan baraf ah oo la filayo in ay sii kordhaan inta lagu jiro isniinta maanta oo ay gaarto caawa sida ay qortay Aftonbladet . Hay’adda taraafikada ayaa ka digtay halista ka jirta waddooyinka sababo la xiriira qabowga ama baraf qoyan. Sida ay sheegtay idaacada Sweden .
Xaaladaha cimilada ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka basaska galbeedka Sweden, gaar ahaan basaska iskuulada. – Waxaan joojineynaa isku socodka basaska iskuulka ee agagaarka Bohuslän, ayay tiri afhayeenka saxaafada Västtrafik Eileen Bilblad.
Gadiidka E6 ee u dhexeeya Strömstad iyo Uddevalla ayaa gaabis ah, sababo la xiriira barafka habeenkii dhaca.
Maamulka saadaasha hawada ayaa soo saaray digniin heerka koowaad ah sagaal gobol, iyagoo filaya in qeybaha dhexe ee dalka ay ku arki doonaan baraf xoog leh. In kasta oo ay soo saartay digniin ku saabsan heerka labaad ee Visternorland ee bariga dalka.
Barafku wuxuu gaaridoonaa 30 cm jämtland, halka Dalarna iyo Värmland uu gaari karo 20 cm. Magaalada Örebro iyo Westmanland, waxay gaari karaan ilaa 15 cm, iyo 10 sentimitir Södermanland iyo Uppsala. Halka, cimilada qabow ay dib uga dhaceyso gobolada Skona iyo Balkinge ugu yaraan maalin.
Hay’ada saadaasha hawada ayaa ka digtay khatarta ka dhalan karta wadada qeybo badan oo ka mid ah Sweden, iyadoo ugu baaqday wadayaasha inay taxaddaraan, gaar ahaan fiidkii.
Warbixin laga sii daayay TV-ga Sweden ayaa fiidnimadii shalay ka hadlay shilal ba’an oo ka dhacay meelo kala duwan oo dalka ah oo ka dhashay wadooyin sibiibixa